Rayson | Intwasahlobo ye-mattress entwasahlobo
I-raysonon eRaysonon Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo esemqoka usayizi ogcwele usayizi ogcwele wentwasahlobo mandalasi umphakeli. Usayizi ogcwele weSpring Matress Prist Umkhiqizo ufaka ukumelana nezinyembezi. Kungamelana nokukhiqizwa okuxakile nokungabi nalutho lokudluliswa kwamandla futhi ngeke kubhujiswe ezimweni ezinzima. Kuhlelwe ukukhiqiza okuphelele ngaphambi kokukhiqizwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi iRayYon ikhiqizwa kahle nangokunembile. Usayizi ogcwele weSpring Matress Intengo Ukuthandwa kanye nedumela likaRayson Spring Matress umenzi wemakethe emakethe ayakhuphuka.
Ukuqondiswa okusha kwesayensi kanye nezobuchwepheshe, iRayson ihlala ihlala igxile ngaphandle futhi inamathela ekukhuleni okuhle ngesisekelo sokwenziwa kobuchwepheshe. Intwasahlobo ye-mattress entwasahlobo uma unentshisekelo kumkhiqizo wethu omusha we-Mattlest Mattress BOX STRIC STRIC STRIC STRIC STRIC STRIC STRIC STRINCE kanye nabanye, wakukwamukela ukuthi uxhumane nathi.
Ngemuva kweminyaka yentuthuko, sisungule ubudlelwane besikhathi eside ngokubambisana namakhasimende ethu emhlabeni wonke. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthumela imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona ukulimala okwenzeka ezimpahleni ezilethwe. Sikwamukela ngokweqiniso uphenyo lwakho nocingo.
Ungangisiza ekwenzeni umklamo wethu noma usebenzise ilogo yami emkhiqizweni?
Singenza umatilasi ngokusho komklamo wakho noma ukuhlinzeka insizakalo ye-OEM vele nje udinga ukuthi usinikeze ubuciko bakho bomkhiqizo noma izithombe ze-logo.